Waa maxay shabakad aan aamin lahayn, iyada oo aan loo baahnayn kalsooni - Cazoo
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » Waa maxay shabakad aan aamin lahayn, iyada oo aan loo baahnayn kalsooni
Tag: Blockchain, nidaamyada dhexe, nidaamyada baahsan, kalsooni la'aan
Waqtiga akhriska: 2 minuti
Nidaam kalsooni la'aan waxaa loola jeedaa kaqeybgalayaasha ku lugta leh uma baahna inay ogaadaan ama aaminaan midba midka kale ama dhinac saddexaad nidaamka inuu shaqeeyo. Jawi aan kalsooni loo baahnayn ma jiro hal hay'ad oo awood u leh nidaamka, iyo is afgarad waa la gaadhay iyada oo aan ka qaybgalayaashu aqoon ama is aaminin hadaanu ahayn nidaamka laftiisa.
Hantida soo jireenka ah ee kalsooni darrida shabakadda asaag-faca ah (P2P) waxaa soo saaray Bitcoin, maadaama ay u oggolaatay dhammaan xogta macaamillada in la xaqiijiyo oo si aan macquul ahayn loogu keydiyo blockchain dadweynaha.
Aaminaaddu waxay ku jirtaa inta badan macaamilada waana qayb muhiim u ah dhaqaalaha. Si kastaba ha noqotee, nidaamyada aan u baahnayn kalsoonida waxay leeyihiin awood ay dib ugu qeexaan isdhexgalka dhaqaale iyaga oo dadka u oggolaanaya inay aaminaan fikradaha la taaban karo halkii ay ka ahaan lahaayeen hay'adaha ama dhinacyada kale ee saddexaad.
Waxaa muhiim ah in la tixgeliyo in nidaamyada "kalsooni la'aanta" aysan gebi ahaanba baabi'in kalsoonida, laakiin taa badalkeeda way qaybiyaan nooc dhaqaale oo dhiirrigeliya dabeecadaha qaarkood. Xaaladahaas marka loo eego waa ka saxsan tahay in la yiraahdo kalsoonida waa la yareeyay laakiin lama baabi'in.
I nidaamyada dhexe aan sono ahayn kalsooni la'aan maaddaama kaqeybgalayaashu ay u igmanayaan awoodda qodob udub dhexaad u ah nidaamka una oggolaadaan in ay gaaraan oo ay fuliyaan go'aamada. Nidaamka dhexe, illaa iyo inta aad ku kalsoon tahay qofka saddexaad ee aad ku kalsoon tahay, nidaamku wuxuu u shaqeyn doonaa sidii loogu talagalay. Laakiin iska jir dhibaatooyinka, xitaa kuwa culus, ee ka dhalan kara haddii cidda lagu kalsoon yahay .. aan lagu kalsoonaan karin. Nidaamyada dhexe waxay u nugul yihiin cilladaha nidaamka, weerarada ama jabsiga. Xogta sidoo kale waa la badali karaa ama lagu maamuli karaa maamulka dhexe iyadoon wax ogolaansho dadweyne ah laga haysan.
Waxaan ku kalsoonahay nidaam dhexe sida Binance, oo aan aaminsanahay inuu yahay mid aad u culus oo lagu kalsoonaan karo. Waxaad ka akhrisan kartaa hagaha halkan si aad u fahamto waxa Binance yahay iyo sida loo isticmaalo. Ma rabtaa inaad ka iibsato cryptocurrency on Binance? Hagaag, ku samee adigoo riixaya badhanka hoose: waxaad heli doontaa 20% qiimo dhimis guddiyada, weligood! Maxaa diidaya?
Iibso CRYPTOCURRENCIES EE biinka
Hadda aan helno wax yar oo falsafad ah, laakiin aniga ila joog: markay tahay lacag, nidaamyada dhexe waxay u badan tahay inay leeyihiin rafcaan ka ballaaran tan nidaamka baahinta (kuwaas oo ah kalsooni la'aan), Maaddaama dadku u muuqdaan kuwo ku faraxsan farxad toosinta kalsoonida xagga ururada halkii nidaamyada loo raaci lahaa. Si kastaba ha noqotee, halka ururadu ka kooban yihiin dad si fudud loo laaluusho, nidaamyada aan u baahnayn aaminaad waxaa lagu maamuli karaa gebi ahaanba koodh kombiyuutar.
Seeraar iyo caddeyn kale oo shaqo xannibista ayaa hela lahaanshahooda kalsooni la'aan bixinta dhiirigelin dhaqaale oo loogu talagalay dabeecadda daacadnimada. Waxaa jira dhiirigelin lacageed oo lagu ilaalinayo amniga shabakadda, iyo aaminaad ayaa loo qaybiyaa kaqeybgalayaal badan. Tani waxay ka dhigaysaa xannibaadda inta badan u adkaysiga u nuglaanta iyo weerarada, iyada oo la baabi'inayo hal dhibic oo guuldarro ah.
Fadlan La wadaag Tan La wadaag nuxurka
Wuxuu ku furmayaa daaqad cusub
Akhri maqaalada kale
Maqaalka horeTaariikhda Blockchain
Maqaalka xigtaDammaanad la'aan
Sidoo kale waad jeclaan kartaa
La cusbooneysiiyay: Sidee loo helaa astaamahaas sameeya X100 ka hor inta aan la daahin?
.... DHAWAAN BILAABAA....
hal abuur yeelato
Ka raadi shabakada
Qiime dhimis 20% guddiyada
Haddii ay wali tahay inaad ku biirto Binance, isticmaal lambarkan gudbinta:
ama raac xiriirkan:
Soorare: waa maxay horyaalada jira xagaaga? La cusbooneysiiyay 2022
Binance ma ammaan baa? Waxa ay maamushay 30% mugga goobta ee lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' bishii Maarso 2022
Waa maxay ururinta cusub ee NFT ee imanaya 2022?
Halbeegyada lagu tixgaliyo gadashada iyo iibinta NFT-yada
Chain Binance Smart
Iibsiga waxyaabaha loo yaqaan 'cryptocurrencies'
Waxaan u qoraa qoraalladayda si aan u xafido. Haddii ay adiga kugu habboon yihiin adigana, waan faraxsanahay.
Geedaha Merkle Dhibcaha oo dhan Binance Binance ee Afrika Gudbinta Binance Aqoonsiga Gudbinta Binance Chain Binance Smart bitcoin Blockchain Boca Juniors Xeerka Gudbinta Binance Dapps Defi DEX Citaah ethereum Mashiinka Virtual Ethereum (EVM) khasaare waara Launchpad Metamask Macdanta Bitcoin NFT nuncio Astaamo aan fungible ahayn Isku beddel khasaare waara Barkadda dareeraha Caddeynta Shaqada Naadirka Code Referral Shabakadda silsiladda 'Binance Smart Chain Network' Shabakada Ethereum nidaamyada dhexe nidaamyada baahsan Qandaraasyada smart Soorare Abaalmarinta kaararka Kaararka Sorare dhifka ah Kaararka Sorare Super Rare Kaadhadhka Gaarka ah ee Sorare Stablecoin Koob la'aan Vitalik Buterin Salada Beeritaanka beeraha